October 9, 2019 - CeleLove
အပြစ်မရှိတဲ့လူငယ်ကို လက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းပြီး လူပုံအလယ် ထိုးလိုက်သေးတဲ့ ရဲနဲ့ သူတင်တဲ့ Status
October 9, 2019 Cele Love 0
အပြစ်မရှိတဲ့လူငယ်ကို လက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းပြီး လူပုံအလယ် ထိုးလိုက်သေးတဲ့ ရဲနဲ့ သူတင်တဲ့ Status အပြစ်ကင်းစင်ပါလျက် သံသယရှိသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းကို အသာတကြည်လက်ခံနေပါလျက် အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ရဲတဲ့ အထူးမူးယစ်က Ye Min Aung သို့ ….. တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အနေနဲ့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမယ့် […]
ဖြိုးပြည့်စုံတို့ကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲတယ်ဆိုပြီး အဖမ်းခံရအောင် ရဲကိုသတင်းပေးချောက်ချတဲ့သူ
ဖြိုးပြည့်စုံတို့ကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲတယ်ဆိုပြီး အဖမ်းခံရအောင် ရဲကိုသတင်းပေးချောက်ချတဲ့သူ ဖြိုးပြည့်စုံတို့ကို ချောက်ချတာဒီကောင်ပါ ။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှမဟုတ်ပဲ ရဲတွေနာမည်ပျက်အောင်ရိုက်ပီးဖမ်းတဲ့ကောင်ပါ …။ ဘာကောင် မှ မဟုတ်ပါဘူး ။ မူးယစ်သတင်းပေးအင်ဖော်မာအဆင့်ပါ ။ ဘာသောက်လုပ်မှလည်း မရှိပါဘူး …။ အရင်ကသူကိုယ်တိုင်ဆေးချနေတဲ့ကောင်ပါ။ အရင်ကတာမွေမှာနေတယ် ခုတော့မသိ သူ့အဖေကတက်စီမောင်းပါတယ် …။ အသက်က၂၃ ဘာသောက်လုပ်မှမရှိတော […]
ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ ပြောပြီ……
ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ ပြောပြီ…… နစ်နာမှုအတွက်မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ “ကျနော် ၊ ရော်နီ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းကိုတို့ရဲ့ မှန်ကန်မှုကို ယုံကြည်ပေးတဲ့ အယောက်ချင်းစီ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မှာ media conference လေးတခု လုပ်နိုင်ဖို့ ကျနော် စီစဉ်ပါ့မယ်..” လို့ ဖြိုးပြည့်စုံက FaceBook […]
ခုပဲ သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ..?
ခုပဲ သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ..? ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာလိုက်ရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော် …။ နံပတ် (၁) ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစားအားကိုးခံရမည့်သူပါ။ အမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ […]
ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေသူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီ…
ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေသူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီ… ” ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်ကအမြဲပြောနေသူတွေအတွက် ” ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြား ကြပ်တည်းလာတာ ပို သိသာလာတယ် …။ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခနခနတွေးနေရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အယူအဆမဟုတ်ဘူး။ ဘာသာရေး အတွေးမဟုတ်ဘူး […]
အခက်ကြုံတိုင်း ကြည့်ဖို့ (၇) ရက် သားသမီးများအတွက် 2019 တစ်နှစ်လုံးစာ ဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာ
အခက်ကြုံတိုင်း ကြည့်ဖို့ (၇) ရက် သားသမီးများအတွက် 2019 တစ်နှစ်လုံးစာ ဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာ 2019 ခုနှစ် ၇ ရက်သားသမီးများအတွက်( ၁ )နှစ်စာဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာ မိမိတို့ရဲ့ ဟောစာတမ်းကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ကောင်းတဲ့ […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ရဲ့ လုပ်ရပ် ဗွီဒီယိုဖိုင်
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ရဲ့ လုပ်ရပ် ဗွီဒီယိုဖိုင် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းထဲမှာ ခွေးလေးတွေ အစားကောင်းကောင်းစားရမှာပဲ…..သနားစရာကလေးနှစ်ဦး လတ်တလော ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်မှာ အကောင့်ပိုင်ရှင် Swe Swe Oo ဆိုသူရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပြီး ဒါဟာ ကလေးငယ်လေးနှစ်ဦးရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်နှလုံးထားကောင်းကို အင်တာနာသုံးစွဲသူတွေ […]
တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံပါ ၃ ဦးအား ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ
တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံပါ ၃ ဦးအား ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံ အပါအ၀င် ၃ ဦးအား ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ် …။ ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းတွင် တရားစွဲဆိုထားသော တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံပါ ၃ ဦးအား ဓာတုဗေဒ၀န်ရုံးမှ ပြန်ကြားချက်အရ မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်ခြင်း အရ […]
မျက်နှာအလှဖျက်နေတဲ့ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို လုံးဝလျော့ပါးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၆) ခု
မျက်နှာအလှဖျက်နေတဲ့ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို လုံးဝလျော့ပါးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၆) ခု မျက်နှာအရေပြားအောက်က အဆီဂလင်းကနေ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အဆီတွေနဲ့ချွေး၊ ဖုန်မှုန့် မိတ်ကပ်တွေနဲ့ရောပြီး ချွေးပေါက်ထဲမှာ ပိတ်သွားပြီး ဆားဝက်ခြံ၊အဆီဖုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုညှစ်ထုတ်လိုိက်ပြီးရင်လည်း ချွေးပေါက်ကနဂိုထက်ပိုကျယ်သွားပြီး ပြန်မကျဉ်းသွားဘဲ ဆားဝက်ခြံပြန်ဖြစ်ဖို့ပိုလွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကဖြစ်ပြီးသွားရင် ပြန်ပျောက်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး၊ ပိုဆိုးမသွားအောင်ရယ်၊ လျော့နည်းသွားအောင်ရယ်ပဲလုပ်နိုင်တာပါ။ ဒါဆို […]
ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန်သွားတဲ့ ချစ်သူ မိမိထံအမြန်ဆုံး စိတ်ပြန်လည်လာရန် အစီအရင်
ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန်သွားတဲ့ ချစ်သူ မိမိထံအမြန်ဆုံး စိတ်ပြန်လည်လာရန် အစီအရင် ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား ….?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲ ထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား ….? အိမ်ထောင်သည် ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့ အိမ်ရှင်မများ စိတ်သောက ရောက်နေပြီလား ….? […]